Izindatshana zikaTricia Gellman zivuliwe Martech Zone
Imibhalo nge UTricia Gellman
Ukuntuleka kwemisebenzi kwehle ngamaphesenti angama-8.4 ngo-Agasti, njengoba iMelika ilulama kancane kancane esiqongweni sobhadane. Kepha abasebenzi, ikakhulukazi abathengisayo nabasebenza kwezentengiso, babuyela endaweni ehluke kakhulu. Futhi akufani nanoma yini esake sayibona ngaphambili. Ngenkathi ngijoyina i-Salesforce ngo-2009, sasisezithendeni ze-Great Recession. Ingqondo yethu njengabakhangisi ithonywe ngqo ukuqiniswa kwamabhande ezomnotho obekusanda kwenzeka emhlabeni wonke. Lezi kwakuyizikhathi ezinzima. Kepha